Raad Raac News Online – Deg deg: Shirka madasha kaluumaysiga soomaaliyed oo soo gabagaboobay lagana soo saaray 6 qodob oo
Deg deg: Shirka madasha kaluumaysiga soomaaliyed oo soo gabagaboobay lagana soo saaray 6 qodob oo
Somalia October 26, 2017 Comments Off on Deg deg: Shirka madasha kaluumaysiga soomaaliyed oo soo gabagaboobay lagana soo saaray 6 qodob oo
Shirka madasha kaluumaysiga soomaaliyed ee socday mudo sadex maalmood ayaa laga soo saaray 6 qodob oo la isku raacay waxayna kala yihiin..
kaluumeysiga sharci darada ah wuxuu culeys saaray kaluumaysatada soomaaliyeed kaas oo ku haya dhib badan, wuxuuna kordhiyay nabad galyo xumada badan, taas oo uu ku keenay dhaqdhaqaaqii ganacsiga, sidaa daraadeed waxaa la isku raacay in laciribtiro jariifka sharci darada ah.
madaama Bada Soomaaliyo ay leedahay kaluun noocyo kale duwan ayna daneenayan ajaaniibta dalalka kala duwan in ay ka faaideystan, waxaana la isku raacay madaama soomaaliya aysan laheyn shati ay siyaan maraakiibta in lasiyo shati si daqliga ka soo baxo loogu maalgaliyo ama lagu hormariyo kaluumeysiga. Waxaana si guud la isku raacay in la bixiyo shati si ayugu faaideystan dadka soomaaliyeed.
sidoo kale waxaa la isku raacay madaama wasaaraduhu kaluumeysiga dowladda soomaaliya iyo maamlugobaleedyada in ay isku yimadan kulan sadexdii bilood mar in kulan laqabto si loo hormariyo kaluumeesatada.
madasha shrikan waxaa la isku raacay madaama aqoontada kheyraadka bada ay muhiim tahay in a barto, madaama soomaaliya ay leedahay xeeb ugu dheer Africa, aysan laheyn awood ay ku tababarto kaluumeesatada: waxaa la isku raacay in la dhiso aqoon cilmiga badaha iyo kaluumeysiga.
madaama ay badan yihiin kaluumeesatada soomaaliyeed waxaa la isku raacay in mashaariicda mustaqbalka ay noqdaan kuwa hormarineeed,sidoo kale waxaa la isku raacay in kor looqaado awooda hay’addaha kaluumeysiga soomaaliya
isku duwida daneeyayaasha arimaha kaluumeysiga aad ayey muhiim u tahay, madasha kaluumeysatada soomaaliyeed waxay dhiira galineysa in la dhiso iskaashi lataaban karo, waxaana la isku raacay in madasha laqabto sanadkiiba mar.
shirkan ayaa maanta soo xiray Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas, dhawaan kala soco muuqaalo & sawiro la xariira shirka maanta ku soo gabagabooba Garowe.